Malunga nathi - Xuzhou Tianqi Mining Technology Co., Ltd.
Wamkelekile kwiVenkile yeMigodi
Xuzhou Tianqi Mining Technology Co., Ltd.Ukuthengiswa kweShishini:
Yintoni ibhokisi yemigodi?
Ukusukela nge-31 ka-Okthobha ka-2008, i-ID uSatoshi Nakamoto usebenzise iphepha elinamaphepha alithoba ukwenza ilingana ne-trillion yuan yeBitcoin ngaphandle komoya omncinci. Ukusukela ngoko, kule nethiwekhi yabiwa ngokupheleleyo engaziwayo, kuye kwakho umvuzo ngendlela echanekileyo kuye nakubani na osebenza ngempendulo ngokwendlela yemvumelwano iPoW: Ubungqina bomsebenzi kwaye ungowokuqala ukugqibezela indawo yokupakisha. Umvuzo ziibhitcoins eziyi-12.5 ngoku, okanye malunga ne- $ 85,000. Le nkqubo yaziwa ngokuba "yimigodi".
Uhlobo lobungqina bomsebenzi luphelele. Isakhono esomeleleyo sekhompyuter yakho sisixhobo esinokubakho kwimpembelelo ephezulu yokubala impendulo. Kwiintsuku zokuqala, abasebenzi-mgodini babesebenzisa ii-CPUs kunye nee-GPUs kwimigodi eyahlukeneyo. Ngokwanda kwamandla ekhompyuter, amachibi emigodi aqokelela amandla amaninzi ekhompyuter avele. Iphuli yemigodi inethuba elikhulu lokubala impendulo kunye nokufumana umvuzo, ukuze wonke umntu afumane umvuzo kunye nesabelo sonyuswe. Kwangelo xesha, ingxaki ikwavela, kukho inani elikhulu labasebenzi mgodini abahlanganiswe ndawonye, ​​abavelisa kwaye bavelise ingxolo nobushushu, ukusetyenziswa kwamandla okukhulu. Kukho ingxaki ebalulekileyo kunzima kakhulu ukuyihambisa, kuba baninzi kakhulu abasebenzi basezimayini kunye nezixhobo zokusebenza. Ke ibhokisi yam yazalwa.
Umsebenzi wethu kukudala inkqubo yezemali evulekileyo kwihlabathi.
Esi sikhongozeli semigodi sikhongozelayo sinika abasebenzi basezimayini isisombululo esisebenza ngakumbi kunemigodi yokugcina. Inxalenye enkulu yeendleko zemigodi ye-cryptocurrency zivela ekusetyenzisweni kombane nakwiindleko zokugcina. Izikhongozeli zemigodi eziqulathiweyo zinokuhanjiswa ngokulula kwiilori kwaye zithuthwe ziye naphi na apho ufuna ukuya khona ngamandla aphantsi. Ayithintelwanga sisiza, kwaye inokushukumiseka okunamandla, kwaye iyabiza kwaye iyasebenza kwakhona.
Imigodi yaseTianqi igqibile ngembali edlulileyo yokwenza iibhokisi zemigodi ngesikhongozeli. Isebenzisa isinyithi esincinci esincinci esincinci ukuvelisa iibhokisi zemigodi, ezenza ukuba zizinze ngakumbi kwaye zingasindi. Ukongeza, sakhe izikhongozeli zemigodi ye-cryptocurrency ezinokubamba zombini abavukuzi be-ASIC kunye ne-GPU ukuhlangabezana neemfuno zabo bonke abathengi. Ukuba ufuna isitya seenyawo ezingama-40, ibhokisi yemigodi eyenziwe ngokukodwa, okanye iimfuno ezahlukeneyo ezikhethekileyo, eTianqi, naziphi na iimfuno ziya kufezekiswa. Ngo-2020, ibhokisi yemigodi esanda kuphuhliswa kunye nebhokisi yemigodi epholileyo ye-oyile sele ithunyelwe yaza yasetyenziswa yi-customer.
"Siyinkampani egxile kwezona nkonzo zisisiseko zeBit-coin. Ishishini layo lahlulwe langamacandelo amabini: Ukuvelisa iinkcukacha ezahlukeneyo zeebhokisi zemigodi ezihambayo, ukubonelela oomatshini abasebenza kwimigodi esezantsi kunamaxabiso entengiso"
Mholweni! Le yimigodi yaseTianqi. Siyinkampani egxile kwimveliso kunye nokuthengiswa kwebhokisi yemigodi yeselfowuni yedijithali kunye nomatshini wokumbiwa kwemigodi osetyenzisiweyo. Sinefektri yokuvelisa emalunga nama-3,000 eemitha zesikwere, ukuvelisa nokuthumela ngaphandle iinkcukacha ezahlukeneyo zeebhokisi zemigodi ezihambayo ezifunwa ngabathengi eXuzhou China. Singazilungiselela iibhokisi zezimayini ngokwemfuno yomthengi. Ewe kunjalo, sinenani elikhulu leebhokisi zemigodi ezihambayo ezisetyenziswa kwimakethi yaseTshayina kwisitokhwe. Wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu! Sikwabonelela ngeenkonzo zonikezelo kunye nolondolozo kwisiza ngokweemfuno zakho. Ngamafutshane, iTianqi iya kukubonelela ngeseti epheleleyo yezisombululo kuyo yonke into oyifunayo kwimigodi yemali engamanani,
Izixhobo zethu zinomtsalane kubanini bemigodi baseTshayina kunye nakwimigodi emikhulu, ngenxa yoko sinokufumana ngokulula izixhobo zamashishini asezantsi ngexabiso eliphantsi. Ke ngoko, sinezinto ezaneleyo zokufumana umatshini wemigodi owufunayo kwimakethi yomatshini wokumba. Siqinisekisa ngentlonipho yenkampani yethu: wonke umatshini wokumba umgodi weBit-coin esiwuthumelayo kuvavanywa liqela lethu, kwaye sinokuqinisekisa ukusebenza okuqhelekileyo komatshini ngamnye wezemigodi.
isikhongozeli se-antbox, isikhongozeli somlilo, Ikhonteyina ye-btc, asic imigodi asic, kusetyenziswa izixhobo zemigodi ye-crypto, Isitya sebhitmain,